वृद्ध आरोही मीनबहादुर शेरचनको निधन, कीर्तिमान फर्काउने सपना पुरा हुन सकेन ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > वृद्ध आरोही मीनबहादुर शेरचनको निधन, कीर्तिमान फर्काउने सपना पुरा हुन सकेन !
काठमाडौ । विश्वकै सबैभन्दा पाका सगरमाथा आरोही बन्न लागेका मीनबहादुर शेरचनको निधन भएको छ। पाका उमेरमा सगरमाथा चढेर विश्व कीर्तिमान राख्न सगरमाथा आधार शिविर पुगेका ८६ वर्षीय आरोही शेरचनको शनिबार निधन भएको हो।
म्याग्दीको भुरुवा तातोपानीका बेलायती सेनाका पूर्व गोर्खा सैनिक शेरचन सगरमाथा आरोहणका लागि गत वैशाख ३ गते सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेर सगरमाथा आरोहणमा हिँडेका थिए। शेरचनको आधार शिविरमा बिहान ५ बजेर १४ मिनेट जाँदा निधन भएको पर्यटन बिभागले जानकारी दिएको छ।
शेरचन काठमाडौंबाट हेलिकोप्टरमा नाम्चेसम्म हेलिकप्टरमा गएका थिए।
यसअघि शेरचनले ७६ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। सन २००८ मा ७६ वर्षको उमेरमा शेरचनले जापानका ७५ बर्षिय युचिरो मिउराले गरेको किर्तीमान तोडेर सगरमाथाको शिखर चुम्ने गर्ने सबैभन्दा जेष्ठ आरोहीको उपाधि पाएका थिए।
सन् २०१३ मा तिनै युचिरो मिउराले ८० बर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेपछि शेरचनको किर्तीमान खोसिएको थियो। तीनै जापानी आरोहीको रेकर्ड तोड्न शेरचन लामो समयदेखि अभ्यासरत थिए।
२०७४ वैशाख २४ गते १२:२३ मा प्रकाशित
सवारी दर्ता प्रदेशबाट,लाईसेन्स स्थानीय तहबाट
संसद बैठक ११ दिनका लागि स्थगित, किन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा डा. गुणाकर भट्ट
राष्ट्र बैंकले असोज १६ देखि नयाँ नोट बाँड्ने, दैनिक २५ करोड सटही हुने अनुमान !
नेप्सेमा एकैदिन ६ बैंक वित्तिय संस्थाको १ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत !
एक महिनामा ७५ अर्ब रेमिट्यान्स